SoYoungရဲ့မလျော့စဖူး အထူးတန်တဲ့ Promotionများ - Mr. Discount (Myanmar)
Home / Offers / SoYoungရဲ့မလျော့စဖူး အထူးတန်တဲ့ Promotionများ
SoYoungရဲ့မလျော့စဖူး အထူးတန်တဲ့ Promotionများ
🥳🥳🥳💥SoYoungရဲ့မလျော့စဖူး အထူးတန်တဲ့ Promotionများ💥🥳🥳🥳🥳🥳
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ mega saleမှာ 😳၅၀% အထိ treatmentလေးတွေကို လျော့ပေးထားတာဆိုတော့ ဒီထက်တန်တာမရှိတော့ဖူးလေ!
🥰မျက်နှာတင်းရင်းစေတဲ့ကြိုးထည့်ကုသမှုများအားလုံး 30% (ပင့်တင်တင်းရင်းမှုအကောင်းဆုံး ကြိုးအကြီးထည့်တာလည်း မလျော့စဖူး ၃၀%ပါ)
😳Filler effect ပါဝင်တဲ့ Smile lineကြိုး, မျက်အိအိပ်တင်းရင်းကုသမှုများအားလုံး 💥၃၀%
🧐နှာခေါင်းဖြောင့်စင်းကုသမှု, လည်ပင်းအသားအရေတင်းရင်းကုသမှု, ရင်သားပင့်တင်တင်းရင်းအောင် ကြိုးထည့်ကုသမှုများ 💥၃၀%
🥳အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ဆံပင်သန်စွမ်းကုသမှုက ၁၀ကြိမ်ဝယ် ၅ကြိမ်တောင် အပိုရမှာနော်!
😊မျက်နှာအသားအရေတွေ ပြုပြင်ကောင်းမွန်ပေးတဲ့ IPLအလင်းကုထုံး, Oxygen treatment, any facial treatment ၂ကြိမ်ဝယ် ၁ကြိမ်လက်ဆောင်!
😎ကဲ ကိုယ်တွေရဲ့ နာမည်ကြီး ချွေးပေါက်ကျဥ်းစေပြီး အသားအရေပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့ Baby Skin, သွေးရည်ကြည်ကုသမှု, Happy PRPက ၂ကြမ်ဝယ် ၁ကြိမ်လက်ဆောင်!
🧐မျက်လုံးဘေးအရေးကြောင်း, နဖူးအရေးအကြောင်း, V shape Botox 30% Off!
😁အဆီတွေကို တခါတည်းချေဖျက်ပေးတဲ့ အဆီကျထိုးဆေးက ၁လုံး၁သိန်း ၅ကြိမ်ဝယ် ၂လုံးအပိုလက်ဆောင် ၁၀ကြိမ်ဝယ်၅လုံးအပိုလက်ဆောင်!
😳ဆေးထိုးမှာကြောက်တဲ့သူတွေအတွက် အဆီချလေဆာ ၂ကြိမ်ဝယ်၁ကြိမ်လက်ဆောင်(ဗိုက်,ပါး,မေးနှစ်ထပ်,မျက်အိပ်)
🥰တက်းတိပ် ဝက်ခြံကုသမှုများ ၂ကြိမ်ဝယ် ၁ကြိမ်လက်ဆောင်
😘Side effectလုံးဝမရှိတဲ့ အသားဖြူဆေးများ ၁၀ကြိမ်ဝယ် ၅ကြိမ်လက်ဆောင်
❤️မျက်ခွံတင်းရင်းအောင် အဆင့်မြင့်လေဆာဖြင့်ကုသမှု ၂ကြိမ်ဝယ် ၁ကြိမ်လက်ဆောင်!
😉မေးစေ့ချွန်fillerကုသမှု Buy 1 get 1 နှင့် up to 30%Off!
🤩မှဲ့နှင့် အသားပို ဖယ်ရှားကုသမှုများ 30%Off!
🥰အမွှေးအမျှင်များကိုလေဆာဖြင့်ဖယ်ရှားကုသမှု ၂ကြိမ်ဝယ် ၁ကြိမ်လက်ဆောင်!
😁သွားဖြူအောင် လေဆာနှင့်ကုသမှုက ၂၀%လျော့ပါတယ်!
😁၁၅နှစ်/နှစ်၂၀တောင်ခံတဲ့ တချောင်းချင်း သွားကြွေလွှာကပ်ခြင်းက ၁၀% Off
😁အခြား သွားအတွက် အထွေထွေကုသမှုများက ၁၀% လျော့ပါတယ်!
👩🏻မျက်ခုံးတက်တူး, နှုတ်ခမ်းတက်တူးကို ၂၅% လျော့ပါတယ်!
အောက်eyelinerတက်တုးကို ၅၀%တောင် လျော့ပါမယ်!
💥ယူတို့တော့မသိဖူး Adminတောင် အရမ်းတွေတန်လွန်းလို့ ရေးရင်းနဲ့ရင်တွေခုန်နေပါတယ်!
😉အမျိုးတွေ သူငယ်ချင်းတွေကို share and mentionလုပ်ပြီး အသိပေးလိုက်ပါအုံးနော်😉
So Young မှ ဤ Promotion သည် အထိသာဖြစ်ပြီး Promotion တွင် Usage နှင့် Terms & Conditions များရှိနိုင်သည်။
ဖော်ပြပါ Promotion အား ဤ website တွင် စတင်ထည့်သွင်းဖော်ပြသော နေ့မှာ ဖြစ်ပြီး So Young မှ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဤ Promotion အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက So Young ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။